Accueil > Gazetin'ny nosy > Fifidianana : Samy tsy manam-bola ny kandidà
Fifidianana : Samy tsy manam-bola ny kandidà
Efatra andro izao no nanomboka ny fampielezan-kevitra izay ho ben’ny tanàna eto Madagasikara. Mangingina tanteraka ny tanàna fa tsy ahitana fihetsiketsehana toa ireo fifidianana depiote sy filoham-pirenena iny.
Tsy ahitana olona mivorivory miandry kandidà intsony ny tanàna toa ny fahita hatramin’izay. Asa izay hitranga amin’izao fifidianana izao fa malazolazo sy marisarisa ny olona amin’ny akapobeny.
Raha nitety foiben’ny kandidà isan-karazany teto andrenivohitra izahay dia olona diso fanantenana no hita. Nanantena ny hahazo vola ireo olona marobe izay milaza fa hanohana kandidà. Tsy dia ilay kandidà loatra no tena tiana ho lany fa ny vola any aminy no tena kendrena.
Diso fanantenana izy ireo amin’izao fotoana izao satria afisy sy banderole ary sorabaventy no nasaina nentiny nody fa tsy ilay vola nantenaina. Ny tamin’ny foiben’ny kandidà sasany aza dia tsy nisy na fitaovana ho entina fa bala roar sisa no ataon’ireo mpikarakara.
Misy ireo mpikarama an’ady amin’ny fifidianana ireny no mimenomenona fa tsy hampiasany ny fitaovana izay nomena azy satria tsy misy vola.
Raha toa ka ny tantaran’ny fifidianana no asian-teny dia maro ny kandidà voafitaka manerana an’i Madagasikara hatramin’izay. Manana delege any amin’ny birao fandatsaham-bato ny kandidà iray nefa rehefa tonga ny fifidianana dia tsy mahazo na vato iray aza.
Efa zatra nozaraina vola ny mpanao fampielezan-kevitra teto Madagasikara amin’ny fotoanan’ny fifidianana toa izao. Tsy maintsy hisy fiatraikany amin’ny fifidianana ny tsy fisian’ny fizarana vola izay mitranga amin’izao fotoana izao io. Inoana fa hisy ny fahadisoam-panantenana amin’ity raharaha ity.
Ny tena olana koa dia ny tsy fizarana zavatra amin’ireo mpifidy. Tsy hita intsony ireo maro anaka manao andiany mamonjy kandidà toa ny fahita amin’ny fotoana toa izao. Midika izany fa tsy manam-bola ny kandidà amin’izao fifidianana ben’ny tanàna izao.
Fahantrana ve izao zava-mitranga izao sa fiovana?
Hatrany ambanivohitra rehetra any dia toa tsy ahitana taratra eto amin’ny firenena fa misy ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana. Misy aza ny kandida tsy manana sary hatao peta-drindrina akory.
Ny zavatra tena mahavariana koa dia ny tsy fahitana antoko pôlitika intsony mandatsaka kandidà amin’izao fotoana izao. Roa na telo ihany izy ireny no antoko sahy miseho sehatra.
Misy dikany be izany ka tsara hofantarina ihany. Na misy aza dia tsy miseho toa ny teo aloha intsony izy ireny fa mandeha toa ireny dahalo sy mpangalatra ireny. Toa miafina sy miery ny vahoaka.
Tamin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena iny dia ambany ny tahan’ny fahavitrihan’ny mpifidy. Nidina izany tamin’ny fifidianana depiote teo ka tsy ampy antsasa-manilan’ny olona tokony hifidy no tonga nandatsa-bato. Nisy nidina tany amin’ny 18 % aza izany tany amin’ny toerana sasantsasany.
Raha izao fizotran’ny raharaha izao dia mety hidina ambany ny tahan’ny fandraisana anjaran’ny mpifidy amin’ity fifidianana izay ho ben’ny tanàna ity.